Dhageyso Weeraro Isugu Jira Dagaal’Qarax Iyo Duqeyn Oo Ka Dhacay Gobalka Sh/hoose. – Calamada.com
Dhageyso Weeraro Isugu Jira Dagaal’Qarax Iyo Duqeyn Oo Ka Dhacay Gobalka Sh/hoose.
Xalay Fiidkii ayaa ciidamada Mujaahidiinta waxay weerar toos ah iyo duqeyn ka fuliyeen duleedka degmada Baraawe halkaasoo ay fariisimayaal ku kala leeyihiin ciidamo ka tirsan Afrikaanta.
Howl galka ugu horreeyay ayaa waxaa lagu beegsaday fariisin Kuffaarta ay ka sameysteen deegaanka Ambareeso oo 5 KM u jira Baraawe waxaana halkaas ka dhacay dagaal faraha looga gubtay.
In muddo ah oo rasaastu ay socotay nasiib wanaag Mujaahidiinta waxay si nabad galyo ah kusoo dhameysteen weerarkii ay qaadeen,waxaa xigay duqeyn sidoo kale lagu garaacay saldhig kale oo u dhaxeeya Ambareeso Iyo Baraawe.
Saraakiisha Mujaahidiinta waxay noo sheegeen in dhowr gantaal ay ku dhacday xerada taasoo keentay gubashada teendhooyin sida wararka aan ku heleyno.
Lama oga ilaa hadda tirada rasmiga ee howl galladaas kaga halaagsamay ciidanka Kuffaarta Afrikaanta.
Dhanka kale xalay abaaro shan saac oo habeen nimo ciidanka Mujaahidiinta waxay dagaal ku qaadeen deegaanka Bilaal oo duleedka ka ah magaalada Marka.
Waxay Mujaahidiinta kasoo galeen dhanka Marka kadibna waxay dagaal ku bilaabeen xerada Afrikaanta halkaas la huwiyay hubka noocyadiisa kala duwan.
Diryanka madaafiicda la isu adeegsanayay ayaa waxaa laga maqlayay meelo fog fog oo ka tirsan wilaayada,saraakiisha Mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in weerarkii xalay ay qasaare nafeed ku gaarsiiyeen ciidanka Afrikaanta.
Sidoo kale qarax ayaa ka dhacay xerada Al-tadaamun oo ku taala degmada Afgooye taasi oo fariisin u ah maleeshiyaatka Murtadiinta’qaraxa waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaartay maleeshiyaatkaasi.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 05-08-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 05-08-1437 Hijri.